बलात्कारीभन्दा अपराधी हुन् पत्रकार ?
कृष्णबहादुर मसाल, केबी प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि बहस जारी छ । आइतबार बिहान धुम्बाराहीमा सञ्चारमन्त्रीसहित विगतमा माओवादी र एमालेको मिडिया इञ्चार्ज भएकाहरु पनि बोलाइएछन् । तर उनीहरू बोलेको खासै सुनिएन । सुवाष नेम्वाङले विगतकै सहमति, सहकार्यमा संशोधनको कुरा गरेछन् । आमसञ्चार ऐन अरु डरलाग्दा छन् । मिडिया काउन्सिल ऐनको विरोधमा स्वयं सञ्चारमन्त्रीकै पूर्व सम्पादकहरू शम्भु श्रेष्ठ, किशोर श्रेष्ठलगायतको टोली देखिएपछि धेरै भन्नै परेन । गोपाल… विस्तृत समाचार
​पत्थरमा ग्रहदशा सर्दैन कमरेड
रामकुमार एलन २५ वर्ष भयो साध्यबहादुर भण्डारी नागरिकताले देश सिक्किम र फिजीकरण हुँदैछ भनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै गृहजिल्ला झापामा भारतीयले नागरिकता पाइरहेको समाचार छापिएकै छन् । के २५ वर्षसम्म एउटै मुद्दामा हिँडिरहेका साध्यबहादुर भण्डारीको एजेण्डा गलत थियो ? थियो भने बालुवाटार बोलाएर किन सम्झाउन सक्दैन सरकार ? प्रतिपक्ष सामाजिक सञ्जालमा मात्रै देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र नर्सिङ, आयुर्वेद, प्रयोगशाला दुनियाँ विधा छन् । गोविन्द केसीको अनशन… विस्तृत समाचार
​किन यसबारे बोल्नुहुन्न कमरेड ?
२२ बैशाख २०७६
नारायण पौडेल विद्यालय तहको इतिहास शिक्षक देशको राष्ट्रपति भएको तथा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र भ्रष्टाचारको बलियो जालोसँग जुधेको रोमाञ्चक कथामा आधारित टेलि सिरियल हो –जनताको सेवक । सेवकको भूमिका निर्वाह गर्ने हाँस्य कलाकार भ्लादिमिर जेलेन्स्की वास्तवमै युक्रेनको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । टेलिसिरियलमा राष्ट्रपति खेलेर ३ वर्ष तथा वास्तविक राजनीति थालेको वर्ष दिनमै उनी निर्वाचित भएका हुन् । बाराक ओबामालाई सन् २००४ सम्म अमेरिकाले चिन्दैनथ्यो ।… विस्तृत समाचार
​हुन त हो, तर के हो–के हो !
१३ बैशाख २०७६
विदुर खड्का नेकपाले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहसम्मको पार्टी एकता टुंग्याएको छ । दुई ठूला र जटिल संरचना भएका बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टीबीच संगठन र विचारमा गरिने एकता सोचेभन्दा जटिल थियो । भूगोल संगठनका जिल्लातहसम्म एकता सम्पन्न गरेर नेतृत्वले महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको छ । यसका लागि नेतृत्व, कार्यदलका सदस्य र पार्टीका सबै सदस्यलाई बधाई दिनुपर्छ । तर, जुन विधि बनाएर पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष… विस्तृत समाचार
​पटक–पटक सतित्वको परीक्षा दिइरहनुपर्ने ?
२९ फाल्गुन २०७५
रमण पनेरु संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई लिएर विभिन्न अन्तर्वार्ताका अंश र टिका–टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा छाएका छन् । सरकारले सिके राउतसँग गरेको सहमति र मधेसमा जनमत संग्रहको चर्चासँगै नागरिकताका प्रावधानहरू खुकुलो पारिनुलाई तराईलाई नेपालबाट टुक्राउने षड्यन्त्रको रूपमा डा. युवराज संग्रौला लगायतले अथ्र्याइरहेको अवस्था छ । त्यसैगरी सिमाना तथा नागरिकता विज्ञ हेमन्त सेढाईंले विभिन्न स्रोतहरू उद्धृत गर्दै विगतमा पनि ४ लाखसम्म भारतीयलाई नागरिकता दिइएको र २१ औँ… विस्तृत समाचार
​कांग्रेसले हानेको बम सगुन थियो ?
१८ फाल्गुन २०७५
अनिल शर्मा विरही कमरेड विप्लव नेतृत्वको नेकपाले एनसेल नामक दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीमाथि कारवाही गरेपछि विभिन्न कोणबाट बहसहरु भएका छन् । घरानियाँहरूले कडा आपत्ति र विरोध जनाएका छन् । झापाका एकजना झापा विद्रोहकालीन नेताले अरुण –३ मा आक्रमण भएको र विराटनगरस्थित भारतीय अवैध ‘दूतावास’ मा आक्रमण भएको खबर सुन्नासाथ ‘यो देशमा देश र जनताको विरुद्ध जानेहरुलाई थ्रेट गर्ने शक्ति पनि रहेछ भन्ने भयो । स्वाभीमानबोध भयो… विस्तृत समाचार
१९ पौष २०७५
तीर्थ सिग्देल झण्डै अढाई दशकअघि भर्खरै पञ्चायत व्यवस्था अन्त्य भएको थियो । त्यसअघि र लगत्तै दलले आन्तरिक जीवनमा गरेका अभ्यास र प्रयोगको छुट्टै महत्व र अर्थ हुन्थ्यो । झापाको अखिलका कमिटीहरूमा आबद्ध थिएँ । कमिटीका हरेक बैठकमा एजेण्डाको पहिलो विषय बन्थ्यो, आलोचना–आत्मालोचना । बैठक शुरु गर्दाताका नै विगतका कामको समीक्षा र छलफल हुन्थ्यो, कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी । त्यस विषयमा बोल्नेले न भोलिका दिनमा कारबाही भोग्नुपथ्र्याे… विस्तृत समाचार
१३ पौष २०७५
नरेन्द्रजंग पिटर रूपचन्द्र विष्टले दुईअक्षरे थाहा आन्दोलन चलाए र सकार–नकार जो, जस्तो छ, त्यस्तै थाहा पाए । उनका शिष्य अजय सुमार्गी र माननीय रामनारायण बिडारीले पनि आफूमा अन्तरनिहित योग्यता, क्षमता र प्रतिवद्दता राम्रैसँग थाहा पाए । जानकारहरू भन्छन्– जनयुद्दको फलिफाप सुमार्गी र बिडारीलाई जति अरु कसैलाई भएन । राजनीतिमा अहिले थाहा पाइएको विषय के हो भने केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा आ–आफ्ना पार्टी र… विस्तृत समाचार
१६ मङ्सिर २०७५
नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै समस्याको सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यकता र औचित्यमा आधारित अझ प्रगाढ, अझ उन्नत र सुमधुर सम्बन्ध विकासका लागि उपाय सुझाउन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले संयुक्त रूपमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेको ५ महिना हुन थालेको छ । प्रतिवेदन बनेको एक महिनाभित्र दुवै प्रमलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने कार्ययोजना भारतीय पक्षबाट इपिजी समूहका संयोजक भाजपा नेता भगतसिंह कोसियारीले खुलाइसकेका थिए । दुई प्रधानमन्त्री मोदी र ओलीको… विस्तृत समाचार
नरेन्द्रजंग पिटर चतुरेका घ्राणशक्ति र सफलता सूत्र अनौठा हुन्छन् । कुन बेला कुन राजनीतिक दल र दलभित्र पनि कुन गुट वा गिरोह हाबी हुन्छ ! कुन खुशप्रसाद, खुशकुमारी र खुशीलालकोमा दैनिक हाजिरी जनाउनुपर्छ ? कुन चरणदासको हिसाबकिताब बहीखाता सजाएका छन् भन्ने हेक्का राख्छन् । ठाकुरेहरू के भन्दा, कुन राग गाउँदा खुशी हुन्छन् ? मिहीन हिसाबकिताब राख्छन् । कुन गिरोहको कुन लठैत कुन शक्तिकेन्द्रमा छ र… विस्तृत समाचार